Abavelisi beTatoo abavelisi, abaxhasi - China Umvambo weCartridge zeFektri
Flame Inaliti iCartridge kunye ndizayo ethambileyo
I-1) Iikhatriji zelangatye zedangatye ezenziwe kwaye zahlanganiswa zikwimo yezempilo. 2) iyahambelana nazo zonke iintlobo zeekhatriji zeCheyenne kunye noomatshini. 3) Yenziwe ngeenaliti zepremiyamu, inwebu yokukhusela ngaphakathi kwinkqubo. 4) Inqaku elikhethekileyo kunye nomzi mveliso wokuqala, iindlebe zeminwe zikunika indawo efanelekileyo yokuphumla umnwe ngelixa usebenza. I-5) I-EO yangaphambi kokubola kwaye ipakishwe kwiipakethe ze-blister ezingenazintsholongwane. I-6) isitayile esitsha Uyilo lweplastiki olugqibeleleyo lubambe i-inki kakuhle kwaye lwenza ukuhamba kwe-inki ngcono. 7) iinaliti zilungile ...
MO Inalidi yeekhatriji ezinomlenze othambileyo
I-1) I-cartridge ze-MO ezenziwe nge tattoo zaza zahlanganiswa zikwimo yezempilo. 2) iyahambelana nazo zonke iintlobo zeekhatriji zeCheyenne kunye noomatshini. 3) Yenziwe ngeenaliti zepremiyamu, inwebu yokukhusela ngaphakathi kwinkqubo. 4) Inqaku elikhethekileyo kunye nomzi mveliso wokuqala, iindlebe zeminwe zikunika indawo efanelekileyo yokuphumla umnwe ngelixa usebenza. I-5) I-EO yangaphambi kokubola kwaye ipakishwe kwiipakethe ze-blister ezingenazintsholongwane. I-6) isitayile esitsha Uyilo lweplastiki olugqibeleleyo lubambe i-inki kakuhle kwaye lwenza ukuhamba kwe-inki ngcono. 7) iinaliti zilungile ...
I-1) Iikhatriji zeenaliti eziNtsha eziLuhlaza, iiKhatriji zetattoo ezikumgangatho ophezulu 2) Iyahambelana nobungakanani beekhatriji ezinkulu kunye noomatshini kwintengiso 3) Yenziwe ngentsimbi engenasici. Inwebu yokhuseleko ngaphakathi kwenkqubo 4) I-EO yangaphambi kokucoca inzalo kwaye ihlanganiswe kwiipakethi ezingenayo i-5) Indawo yokuhlala esezantsi kunye nokuhamba okungcono kwe-inki kunye nokumila ngaphakathi ngaphakathi kwe-6) Kwangaphambi kokubulala iintsholongwane ngegesi ye-ethylene oxide 7) Yenziwe kwi-CE, ISO-9002 & EN Ukucaciswa Kutheni uthenga iimpahla zexabiso eliphezulu kuthi? Eyona Nto iQhelekileyo yokuThenga eyona ibalaseleyo ...
I-WhatsBravo yeNkulumbuso yeTattoo yeNaliti yeCartridge
I-1) Iikhatriji zeNaliti zeWhatsB zenziwe ngolawulo oluphezulu kushishino. 2) Iyahambelana nazo zonke iintlobo zobukhulu beCheyenne cartridge kunye noomatshini. 3) Iinaliti zeNkulumbuso yeeNtsimbi ezingenanto kunye neeNgcebiso zePlastiki zePlastiki. I-4) I-EO yangaphambi kokubola kwaye ipakishwe kwiipakethi zeblasta ezingenazintsholongwane. 5) I-WhatsBravo Tattoo Cartridges zitywinwe ngoKhuseleko lweMembrane. I-6) Mfutshane ngeengcebiso zeCartridge kwimisebenzi yobugcisa echanekileyo, kwaye amagcisa angabamba ukubambelela ngakumbi. 7) Iinaliti ziyi-perf ...
Iikhatriji zeenaliti ze-HRK zeenaliti ezinokhuselo lweMembrane
1) Iyahambelana nazo zonke iintlobo zokubamba iCartridge kunye noomatshini beCartridge 2) Yenziwe ngentsimbi engenasici yaseJapan. Inwebu yokhuseleko ngaphakathi kwenkqubo 3) I-EO Pre-sterilized and package in packer blacks pack 4) Low profile housing & better ink flow & shaped in the inside 5) Pre-sterilized with ethylene oxide gas 6) Iinaliti ziphawulwe nge #, ubungakanani, inzalo kunye neentsuku zokuphelelwa lixesha 7) Owona mgangatho uphakamileyo, intsimbi engenasici engatyiwa 8) Iblister nganye epakishwe 9) Imivalo yelogo yomgangatho wobude ukuze ilingane bonke oomatshini kunye ...